घर आँगनको फूलबाट यत्ति मनग्गै आम्दानी गर्दै गृहिणी,गरे के हुन्न र? सबैले सिक्नै पर्ने कुरा,पढेर शेयर गरौं । – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
घर आँगनको फूलबाट यत्ति मनग्गै आम्दानी गर्दै गृहिणी,गरे के हुन्न र? सबैले सिक्नै पर्ने कुरा,पढेर शेयर गरौं ।
तिहारअघि फूल खोज्दै बस्ती÷बस्ती पस्ने व्यापारीले सोचेभन्दा बढी मूल्य दिन थालेपछि थैलीमा हम्मेसी पैसा नपर्ने गृहिणीमा खुशी थपिएको छ। “यसको पनि पैसा पाइन्छ भनेर त सोचेकै थिइन”,
आफ्नै घरआङ्गनका डिलमा ढकमक्क देखिने सयपत्री र मखमली फुल देखाउँँदै जिल्लाको बर्दिबास नगरपालिका–२ की गृहिणी बृन्दा अधिकारीले भनिन्, “फूल खोज्न आउनेले त बैना भनेर एकहजार पो दिएर गयो।” बृन्दाको आङ्गन डिलमा सयपत्री र मखमलीसहित ५० बोटमध्ये ३० बोटको तीन हजार मोल दिने भनेर बैना समातेको उनको भनाइ छ।
घर करेसा वरिपरि शोभाका लागि लगाइएको मखमली, सयपत्री र गोदावरीसहितका फूलले घरै बसीबसी रु दुई÷चार हजार आम्दानी बनाइ दिएको घरायसी काममै ब्यस्त रहने गृहिणी महिलाले बताएका छन्।
तिहारकै लागि फूल खोज्दै आएका व्यापारी र अरु ग्राहकले आफ्ना ३०/३५ जति बोटका सयपत्री फूलको रु तीन हजार दिन्छु भनेका जिल्लाकै भङ्गाहा–४ की गृहिणी दीपमायाँ श्रेष्ठले बताइन्। करेसाकै फूलका बोटबाट दीपमायाँले रु तीन हजार पाउने देखेपछि छिमेकका अरु गृहिणीले पनि अब व्यवसायिक रुपमै फूल खेती गर्ने निर्णय गरेका छन्।
जिल्लाका १० नगरपालिका र पाँच गाउँपालिकासहित १५ स्थानीयतहमध्ये बलवा नगरपालिकाको पडौल र बनौटा बस्तीमा भने केही किसानले थोरै क्षेत्रफलमा भएपनि विगत केही वर्षयता व्यवसायिक रुपमै फूल खेती गर्दै आएका छन्।
बनौटा र पडौलका किसानले आफ्नो उत्पादन व्यापारीले फूलबारीबाटै लाने गरेका बताएका छन्। यी बस्तीमा उत्पादित फूलको गुणस्तर राम्रो भएकाले व्यापारीको रोजाइमा पर्ने गरेको किसानको भनाइ छ। यहाँ उत्पादित फूल राजधानी काठमाडौँसहित विभिन्न शहरमा पुग्ने गरेको किसान र कृषि बिज्ञले बताएका छन्।
तराईमा विवाहमा दुलहा चढ्ने गाडी सजाउन फूलका मालामा निकै खर्च गर्ने चलन बाक्लिएको छ। जिल्लाकै फूल व्यापारीहरु भन्छन्, “विवाहका लगन बाक्लिएसँगै फूलको माग बढ्छ, त्यस्तो बेला वरिपरि नै फूल पुर्‍याउन धौ–धौ पर्छ, अरु बेला राजधानीतिर पठाइन्छ।”
विशेषगरी तिहारलगायतका पर्वमा फूल खोज्नेहरुले मोलमोलाई नगरिकनै राम्रो मूल्य दिएपछि हरेक वर्ष तिहारमा उत्पादन लिनेगरी फूल खेती गर्न आफ्नो बस्ती/टोलका सबैजसो गृहिणी महिला अग्रसर देखिएको भङ्गाहा–६ हतिसर्वाकी राजवती थारुको भनाइ छ।
Previous अब युवतीलाई यस्ता पुरुष मन पर्न थाले,कस्ता कस्ता मन पर्लान त? पूरा पढ्नुहोस ।
Next गुल्मीमा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल रङ्गशाला निर्माण हुँदै,,,हेर्नुहोस।